7 Ihe ị ga-eme tupu ere Your iPhone
Ya mere, ọ bụrụ na i dị nnọọ zụtara a ọhụrụ smartphone dochie gị ochie iPhone, ọ bụ eleghị anya na ị na-eme atụmatụ na-ere gị ochie iPhone maka ezi price ugbu a. Nke ahụ bụ ihe ndị magburu onwe atụmatụ, enweghị obi abụọ. Otú ọ dị, ị nyere a echiche ihe bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị bụ isi ị ga-eme tupu ere gị ochie iPhone pụọ? Ka anyị ghara ichefu na gị iPhone nwere otutu nke onye ozi na ọ bụrụ na ekpe ke ọjọọ aka bụ ewekarị n'ụzọ.
Ya mere, ebe a anyị dị taa na ndepụta nke 7 kasị mkpa ihe ndị na ị ga-eme tupu ere gị iPhone. Ọ bụrụ na ị dị oke banyere na-ere gị iPhone mgbe ahụ na nke a bụ a ga na-agụ gị.
1. Back elu data na iTunes ma ọ bụ iCloud
Nke a bụ otu n'ime ihe ndị mbụ ị ga-eme, ndabere gị iPhone mere na ị pụrụ weghachite niile data gị iPhone na nyefee ọhụrụ gị smartphone, mgbe ọ bụla ọ dị mkpa. Ugbu a, ị na-achọghị ka ida si na ihe ọ bụla nke ndị dị mkpa kọntaktị, ozi, ndetu wdg
Ị nwere ike iji ihe ọ bụla nke 2 ụzọ maka eke nkwado ndabere na mpaghara gị iPhone; iTunes ma ọ bụ iCloud.
Nzọụkwụ 1: Ẹkedori iTunes na jikọọ na gị iPhone gị na kọmputa.
Nzọụkwụ 2: Gaa Njikwa> Devices> Nyefee ịzụrụ mere na ị nwere ike ịzọpụta niile ebudatara ọdịnaya dị ka si iTunes ma ọ bụ App Store.
Nzọụkwụ 3: Ozugbo iTunes ka okokụre ebufe gị ịzụrụ, na-aga Njikwa> Devices> Back Up.
Nzọụkwụ 4: Ozugbo a usoro dị n'elu, na-ego ma ọ bụrụ na nkwado ndabere na mpaghara na-eme nke ọma, na-aga iTunes Mmasị> Devices. Ebe a, ị ga-ahụ nkwado ndabere na mpaghara na ụbọchị na oge ọ na e kere.
Nzọụkwụ 1: Jikọọ iPhone gị WiFi netwọk.
Nzọụkwụ 2: Gbaa mbọ hụ na gị iCloud ndabere agbanwuru.
iOS 8 ọrụ, enweta na Ntọala> iCloud> Ndabere
iOS 7 ọrụ, enweta na Ntọala> iCloud> Nchekwa & ndabere
Nzọụkwụ 3: See pịa nhọrọ 'Back Up Ugbu a' na-eme ka n'aka na gị iPhone tọrọ jikọọ na WiFi netwọk.
2. Nhichapụ iCloud Akaụntụ
Ihichapụ gị iCloud akaụntụ site na gị ochie iPhone ga-abụ nzọụkwụ ọzọ na huu na gị ochie iPhone na-adịghị anọgide ọ bụla nke gị ozi. Ebe a bụ otú ime otú ahụ.
Nzọụkwụ 1: On gị iPhone, na-aga Ntọala> iCloud. Mgbe ahụ gbadaa na-ahụ ngalaba 'Hichapụ Akaụntụ' ma ọ bụ 'pụọ' na pịa na na.
Nzọụkwụ 2: Ugbu a, nanị gosi usoro nke wepụ gị iCloud akaụntụ site na ịpị na nhọrọ 'Hichapụ Akaụntụ' ma ọ bụ 'pụọ' otu ugboro ọzọ.
Cheta na: Nke a na usoro nwekwara ewepu niile data nke si na iCloud na na-echekwara na gị iPhone.
3. pụọ nke iMessage na FaceTime
Ịbanye si iMessage na FaceTime bụ ihe dị oké mkpa na dịkwa nnọọ mfe ime.
Iji pụọ nke iMessage, na-aga Ntọala> Ozi ma na-anya na n'elu ngalaba nke ihuenyo, si ebe a agbanyụ nhọrọ nke iMessage na nke ga-banye gị nke iMessage.
Na iji pụọ nke FaceTime, na-aga Ntọala> FaceTime na dị ka iso, na-anya na n'elu ngalaba nke ihuenyo, si ebe a agbanyụ nhọrọ nke FaceTime na nke ga-banye gị nke FaceTime.
4. pụọ nke iTunes / App Store
Iji pụọ nke iTunes na App Store, na-aga Ntọala> iTunes & App Store, enweta na gị Apple ID na mgbe ahụ see 'pụọ' button si popup menu, dị ka e gosiri na foto n'okpuru.
5. General Tọgharia (Ihichapu ọdịnaya niile / Ntọala)
Nke a bụ nnọọ mfe ime Otú ọ dị anyị ukwuu nwere ike ikwu na ị na-ịmepụta ndabere maka gị iPhone tupu eme nke a. Iji ihichapu niile ọdịnaya na gị iPhone, na-aga Ntọala> Ozuruọnụ> Tọgharia> Ihichapu ọdịnaya niile na Ntọala.
6.-adịgide adịgide ehichapụkwa iPhone na Wondershare SafeEraser
Wondershare SafeEraser bụ otu n'ime ihe ndị kasị edu software n'ụwa mgbe ọ na-abịa erasing niile data gị iPhone-adịgide adịgide. Ọ nọwo na oke nke ọtụtụ ndị mgbe ọ na-abịa na-echebe onwe ha megide njirimara-ezu ohi. The ngwa, nke bụ maka ma Windows na Mac, nwere ike ibudata site mkpọchi n'okpuru.
Nzọụkwụ 1: Ẹkedori ke software na pịa on nhọrọ nke ihichapu niile Data site na isi window.
Nzọụkwụ 2: Na-esote ihuenyo, ụdị na 'ihichapụ' nkwenye.
Nzọụkwụ 3: ezie na usoro nke erasing na-aga, hụ na gị na iPhone-anọ na njikọ na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 4: Ị ga-ahụ ugbu a a dechara ihuenyo ozugbo nhichapụ usoro zuru ezu.
7. Unregister ngwaọrụ gị na supportprofile.apple.com
Ihe ikpeazụ ga-eme bụ ịgbanwe nwe gị iPhone dị ka unu na-ere ya ugbu a. Na-enwe ike ime nke ahụ, na-aga supportprofile.apple.com na-nbanye gị Apple ID. Ozugbo ite ke, ị ga-enwe ike ịhụ ngwaọrụ gị niile e depụtara n'okpuru gị Apple ID. All na ị ga-eme ugbu a bụ pịa na 'Unregister' button na i kwesịrị ịchọta n'okpuru gị akpan akpan iOS ngwaọrụ nke na nke a bụ gị iPhone.
10 ngwa ọdịnala n'ihi nhicha iPhone Photos
Olee ka ihichapụ ngwa ọdịnala site na ekwentị gị (android ma ọ bụ iPhone)
> Resource> iPhone> 7 Ihe ị ga-eme tupu ere Your iPhone